နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာအိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ | NLD
Home Appointment နိုင်ငံတော်၏ အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် လာအိုနိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးအား လက်ခံတွေ့ဆုံ
Posted By: mygate wayon: ဇူလိုငျ 25, 2018 In: AppointmentNo Comments
နေပြည်တော် ဇူလိုင် ၂၄
နိုင်ငံတော်၏အတိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်သည် လာအိုပြည်သူ့ ဒီမိုကရက်တစ်သမ္မတနိုင်ငံ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး H.E.Mr. Saleumxay Kommasith အား ယနေ့ နံနက် ၁ဝ နာရီတွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာန ၌ လက်ခံတွေ့ဆုံသည်။
တွေ့ဆုံစဉ် နှစ်နိုင်ငံအကြား ချစ်ကြည်ရင်းနှီးမှုရှိသော ဆက်ဆံရေးနှင့် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု မြှင့်တင်ရေး ၊ ဒေသတွင်းနှင့် နိုင်ငံတကာမျက်နှာစာတွင် ပူးပေါင်း ဆောင်ရွက်မှု တိုးမြှင့်ရေးကိစ္စရပ်များအပေါ် ရင်းနှီးပွင့်လင်းစွာ အမြင်ချင်းဖလှယ် ဆွေးနွေးခဲ့ကြသည်။
နိုငျငံတျော၏ အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျ လာအိုနိုငျငံခွားရေး ဝနျကွီးအား လကျခံတှဆေုံ့
နပွေညျတျော ဇူလိုငျ ၂၄
နိုငျငံတျော၏အတိုငျပငျခံပုဂ်ဂိုလျ ဒျေါအောငျဆနျးစုကွညျသညျ လာအိုပွညျသူ့ ဒီမိုကရကျတဈသမ်မတနိုငျငံ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီး H.E.Mr. Saleumxay Kommasith အား ယနေ့ နံနကျ ၁ဝ နာရီတှငျ နိုငျငံခွားရေးဝနျကွီးဌာန ၌ လကျခံတှဆေုံ့သညျ။
တှဆေုံ့စဉျ နှဈနိုငျငံအကွား ခဈြကွညျရငျးနှီးမှုရှိသော ဆကျဆံရေးနှငျ့ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု မွှငျ့တငျရေး ၊ ဒသေတှငျးနှငျ့ နိုငျငံတကာမကျြနှာစာတှငျ ပူးပေါငျး ဆောငျရှကျမှု တိုးမွှငျ့ရေးကိစ်စရပျမြားအပျေါ ရငျးနှီးပှငျ့လငျးစှာ အမွငျခငျြးဖလှယျ ဆှေးနှေးခဲ့ကွသညျ။
အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ဗဟိုလူငယ် ဦးဆောင်အဖွဲ့ ဒုတိယအကြိမ်အစည်းအဝေးကျင်းပ